Kulanka hordhaca Porto Vs Liverpool waxyabaha aad ka helikarto ee Champions league – Walaal24 Newss
February 14, 2018	1	By walaal24
Weeraryahanka Liverpool Roberto Firmino ayaa doonaya inuu Porto ku dhibto “kulanka Champions League ee wareega 16ka ee Champions League.
Kulanka caawa Arbacada ah ee Estadio do Dragao ayaa noqon doona kulankii ugu horeeyay ee Liverpool ee wareega isreebreebka tartanka ilaa 2008-09.
Waxa ay hugaamiyeen kooxdooda iyagoo dhaliyey 23 gool, rikoodh ay ka heleen koox Ingiriis ah, guud ahaanna ay dhaaftay Paris St-Germain.
Goolhayaha kooxda Liverpool Loris Karius ayaa booskiisa ka sii horeyn doona Simon Mignolet,
“Ma aqaano hadii Porto ay cabsi galin doonto, lakiin waxaan dooneynaa inaan noloshooda adkeyno,” ayuu yiri Firmino, kaasoo dhaliyay 20 gool tartamada oo dhan, oo uu ku jiro lixda Champions League.
Xiddiga khadka dhexe Emre Can ayaa ganaax ku maqan, daafaca Joe Gomez ayaa la safray kooxda ka dib markii uu seegay labadii kulan ee ugu danbeysay ee uu ka dhaawacmay jilibka, halka uu 75 milyan oo ginni ugu soo iibsaday Virgil van Dijk oo u muuqda inuu kulankiisii ​​ugu horeysay u ciyaaray kooxda.
Klopp ayaa ku adkeysanaya in kooxdiisa ay ku tartami karto xiddigaha qaarada yurub, iyagoo garaacay “kooxda ugu xoogan ee yurub ee kubada cagta” Manchester City oo 4-3 ku jirta Premier League bishii Janaayo.
“Waan ogahay mar hore, waan la tartami karnaa, ma ahan inaan fiiriyo” ayuu Klopp ku daray.
“Haatan waa inaan muujinnaa inaanan qeyb ka aheyn tartanka, waan ku faraxsanahay, waa sida ay tahay waana inaan si dhab ah u qaadnaa.”
Liverpool ayaan laga badinin FC Porto, iyagoo afar jeer ciyaaray tartamada oo dhan. Labadii kulan ee Portugal ee labadoodaba labaduba waxay ku dhamaadeen barbar dhac.
Kulankoodii ugu dambeeyey ee wareega isreebreebka Koobka Yurub wuxuu ahaa 2000-01 wareega quarter-finalka UEFA Cup. Liverpool ayaa ku badisay 2-0 wadar ahaan labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Porto ayaa laga badiyay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee Champions League.
Porto ayaa gaartay wareega isreebreebka Champions League xilli ciyaareedyo isku xigta markii ugu horeysay tan iyo 2009/10. Ma aysan soo baxin wareega quarter-finalka tan iyo markii ay qaadeen koobkii 2004.
Liverpool ayaa ka mid ah afar kooxood oo aan laga adkaan xilli ciyaareedkan Champions League, oo ay la jiraan Barcelona, ​​Besiktas iyo Tottenham.
Porto ayaa dhalisay goolal badan oo ay ka dhaliyeen sideed kooxood oo ka badan kooxaha kale ee Champions League xilli ciyaareedkan.
Kaliya PSG Stadium Parc des Princes (16) ayaa dhalisay goolal ka badan inta Dragao ee Porto (15) xilli ciyaareedkan Champions League.
Weeraryahanka Porto Vincent Aboubakar ayaa dhaliyay shan gool, waxaana uu labo caawiye ka ahaa xilli ciyaareedkan Champions League – xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa ee xirfadiisa ciyaareed.
Eng Yarisow “Waa inaan u midownaa horumarka Dalkeenna, si looga gudbo caqabadaha horyaalla
Sawiro: Taliyaha cusub Ururka 60aad ee Ilaalada Madaxtooyada oo Xilka la wareegay
Wasiir Beyle “Waxaan Dawlad Gobaleedyada ka codsanaynaa in ay so diraan xisaab celinta lacagahii hore iyo dalabka lacagta cusub”
Daawo: Taliyaha Cidamada Xooga oo uga digay in ay Magaalada hub ku dhex wataan ciidamada aan ka mid aheyn kuwa xasilinta ee logu talo galay amniga Caasimada